Rasaasa News – Mogadishu: Azeb Mesfin oo Cod-Satay Shaqo ka Tagis
Home / News in Somali / 3 /
Mogadishu: Azeb Mesfin oo Cod-Satay Shaqo ka Tagis
on December 10, 2013 2:14 pm
Mogadishu, Somalia, Dec 10, 2013 – Marwada horjoogihii dhintay ee Ethiopia, Meles Zenawi, oo ka codsatay golaha fulinta ee EPRDF, ogolaadaan shaqo ka tagid.
Carmal Azeb Mesfin, waxaa soo wajahay caafimaad daro, loo aaneeyo murugo kaga timid dhimashadii ninkeeda. Waxaa kale oo soo food saaray Carmasha culays siyaasadeed oo ka yimid khilaafka u dhaxeeya ururka TPLF, oo u kala jabay saddex koox.
Ururka TPLF, ayaa dalka Ethiopia ku hogaamiya magaca huwanta EPRF oo ay ku midoobeen afarta urur siyaasadeed (TPLF, ANDM, OPDO iyo SEPDM).
Azeb Mesfin, waxay doonaysaa in ay ku noolaato Maraykanka, degtana Washington ama Virginia, halkaas oo ay ku leedahay guryo uu gatay ninkeedii.
Azeb, waxay Cabsi wayn ka qabtaa in khilaafka TPLF, u dhaxeeya uu keeno daba-gal musuq maasuq. Waxay jeceshahay in Maraykanka si heer caalami ah ay uga sii wado ururka samafalka ee Meles foundation.
Abay Tsehaye, oo ah saaxiib ay isku dhawaayeen Meles Zenawi, haatana ah la taliyaha Raysalwasaraha, ayaa isku dayaya in Azeb ay badasho mawqifkeeda ah in ay dagto Maraykan iyo in ay ka dhax baxdo siyaasada.
Hoos u dhigida Bereket Simon (PM advisor), oo ay Azeb isku koox yihiin waxay muujinaysa in laggaga adkaaday siyaasada. Kooxda labaad waxaa hogaamiya gudoomiyaha TPLF Sebhat Nega (president of Tigray), waxay laftigeedu u egg tahay mid laga adkaaday. Kooxda saddexaad waxaa hogaamiya Debretsion Gebremichael (deputy PM) iyo wasiirka arimaha dibada Tewodros Adhanom.
Warkan oo laga soo xigtay jariirada African Reporter, ayaa muujinaya walaac siyaasadeed oo ku soo fool leh doorashada 2015-ka ka dhici doonta Ethiopia.
Baarlamaanka Kilalka oo Kulan Kadis ah ku leh Jijiga